Soo dejisan TripAdvisor 12.2.1 – Vessoft
Soo dejisan TripAdvisor
TripAdvisor – software ah si ay u qorsheeyaan dariiqyada iyo safri badan wadamada kala duwan ee dunida. Software waxay soo jeedisay in la doorto jihada safarka iyo ku talinaysaa ee DKMG ah oo kala duwan la soo bandhigay ee sharaxaada iyo sawiro leh oo wadada loo qorsheeyey. TripAdvisor awood u tahay in la helo macluumaadka lagama maarmaanka ah oo ku saabsan tigidhada hawada, hoteelada, mukhaayadaha, ama jiga kala duwan. In software ah waxaa suurogal ah in la raadiyo meelo u dhow oo ah inta kale oo loo soo bandhigay khariiradda oo ka mid ah dib u eegista ka soo users kale. TripAdvisor u saamaxaaya in ay ku darto user ay dabagal ku sharaxaad faahfaahsan iyo sawiro leh oo uu marti ka geesood oo kala duwan oo adduunka ah.
Talooyin ku saabsan safarka ka Socdaalba caanka ah
Search for dalal fasax kala duwan ee qaybaha kala duwan
Kartida aad u aragto iyo post comments
Boos-celinta dadka ee dalal fasax iyo tikidhada hawada
Muujiya meelaha u dhow nasasho
TripAdvisor Software la xiriira:
العربية, English, Español, Deutsch... Ustream 2.7.8